Bakhihla esikaNandi isililo abadayisi basemigwaqweni - Ilanga News
Home Izindaba Bakhihla esikaNandi isililo abadayisi basemigwaqweni
Bakhihla esikaNandi isililo abadayisi basemigwaqweni
Abanye baphoqeleke ukwehlisa amanani ezimpahleni ukuze zithengwe zingakonakali
IMITHWALO isobhokweni kosomabhizinisi abaxosha ikati eziko ngokuthengisa izithelo namaveji emigwaqweni yeTheku.
Bathi bayagoduka emuva kwesimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa asikhiphe ngoMso-mbuluko sokuthi izakhamizi zaseNingizimu Afrika kumele zigonqe izinsuku eziwu-21 kusukela namuhla ebusuku ukuzama
ukunqanda ukubhebhetheka kukasomqhele (Coronavirus).
Enkulumeni yakhe uMengameli Ramaphosa, uthe abantu kumele bangagcaluzi futhi bangayi emsebenzini, ngaphandle kwabenza imisebenzi ebalulekile okubalwa kubona amaphoyisa, abahlengikazi, odokotela, abasemabhange nabasemakhemisi.
Kuyimanje abombutho wezempi bankanise emadolobheni ahlukene ukulekelela amaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi abantu bayahlonipha yini umyalelo kamengameli.
ILANGA likhulume nosomabhi-zinisi abanakekela imindeni yabo ngemali abayithola ngokudayisa emigwaqweni – okubukeka bezoshayeka kakhulu ngenxa yalesi sinyathelo okucacayo ukuthi sithathwe nje, bekungekho obekungenziwa – ukuzwa ukuthi bazomisa kanjani nokuthi basibona kanjani isinqumo sikamengameli nekhabhinethi lakhe.
Bakhale ngokuthi bazolahlekelwa yimali eningi ngokungasebenzi zonke lezi zinzuku, okuzokwe-nza ukuba babulawe yinkemane nemindeni yabo.
UNkz Nomzekelo Mtolo (39) wase-Eastern Cape – kodwa ozinze eMayville ngenxa yomsebenzi – odayisa izithelo eWorkshop, eThekwini, utshele ILANGA ukuthi uyagcina ukusebenza ngoLwesine.
Uthe uyagoduka namuhla, uphindela kwelakubo ngoba
kayikho into azobe eyihlalele engasebenzi. “Ngenza imali ngokudayisa izithelo, yiyona
ndlela engondla ngayo ekhaya.
“Sekuphele iminyaka engaphezu kwewu-10 ngidayisa lapha, ukungadayisi kulezi zinsuku ezibekwe wumengameli wezwe, kuzosilimaza kakhulu. Izinsuku eziwu-21 ziningi kakhulu, lokhu kusho ukuthi sizofa yindlala emakhaya,” kusho uNkz Mtolo.
UMnu Samkelisiwe Ngcolosi (30), waseMlazi, uthi itafula lakubo elidayisa amaveji, selineminyaka ewu-15 limile, laqalwa nguyise (ongasekho) – okumanje lisele naye nodadewabo. Uthe njengoba lizoma lingadayisi, bazothwala kanzima, kwazise yilona elixosha ikati eziko.
“Sizokwamukela okushiwo ngumengameli ngoba impilo yiyona ebalulekile futhi ifika kanye. Yize sizofa yindlala, kodwa kumele sithobele umthetho uhulumeni obona ukuthi yiwona ozosiza izwe kulolu bhubhane,” kusho uMnu Ngcolosi.
UNkz Nontembeko Khetho (33), yena odayisa umbila eWorkshop, eThekwini, utshele ILANGA ukuthi yize kunzima kodwa uzosivumela isimo. “Kungcono ngihlale phansi ekhaya ngiphumule kunokuba ngithole leli gciwane. Ngisuka e-Eastern Cape kodwa okwamanje ngiseMlazi, lapho engihlala khona ngiqashile.
“Njengoba kuthiwa kumele kume yonke into sihlale emakhaya, singasebenzi – yize sizoshayeka emaphaketheni – kodwa kayikho into esizoyenza mayelana nalolu daba.
“Mina lapho engihlala khona eMlazi, ngiqashile futhi uma ngingakhokhi, umastende kuzomele asiqonde isimo,” kusho uNkz Khetho. Uthi uzogoduka aye e-Eastern Cape.
UMnu Joey Joshua, odayisa amasaka amazambane, utshele ILANGA ukuthi uwadayisa ngamanani aphansi ukuze ezothengwa ubuthaphuthaphu.
“Okwenza ngiwadayise ngamanani aphansi wukuthi aphele ngoba azobola uma engathengwa-nga wonke. Sibhekene nesimo esibi futhi esingaphezu kwamandla ethu,” kusho uMnu Joshua.
Previous articleothisha bazofundisa emisakazweni
Next articleI-Corona ibhuntshise izinhlelo zokusatshalaliswa kwe-album